TPLF oo Sheegatay in ay sii Deysay Kun Askari – Idil News
TPLF oo Sheegatay in ay sii Deysay Kun Askari
Hoggaanka TPLF ee gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa kun askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolka.
Debretsion Gebremichael, oo ah hoggaamiyaha TPLF ayaa gelinkii danbe ee Jimcihii u sheegay Reuters in kun askari oo ah kuwa ay darajadoodu hooseyso ay sii daayeen.
“In ka badan 5,000 oo askari ayaan wali haynaa, waanna sii hayn doonaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo,” ayuu yiri.
Reuters ayaa warisay in aysan xaqiijin karin sheegashadan. Afhayeenka militariga ayaa sheegay in uusan diyaar u aheyn inuu hadlo, halka afhayeenka maamulka gobolka Amhara uu sheegay in aysan jirin war uu hayo oo ku aaddan sii deynta.